Izenzo ze-Brain Gym® zenzelwe ukunceda ingqondo isebenza kangcono ngexesha lokufunda. Ngaloo ndlela, unokucinga ngemisebenzi yeBrain Gym® njengenxalenye yecandelo jikelele leengcali . Ezi zifundo zisekelwe kwingcamango yokuba umzimba olula osebenzayo unceda ukuphuma kwegazi kwingqondo kwaye unokunceda ukuphucula inkqubo yokufunda ngokuqinisekisa ukuba ingqondo ihlale isilumkiso. Abafundi bangasebenzisa le misebenzi elula ngokwabo, kwaye ootitshala bangayisebenzisa eklasini ukukunceda ukugcina amanqanaba omhlaba uphela ngalo lonke usuku.
Ezi zenzo ezilula zisekelwe kumsebenzi ogunyazisiweyo kaPaul E. Dennison, Ph.D., noGail E. Dennison. I-Brain Gym® yirhwebo elibhalisiweyo leBrain Gym® International. Ndaqala ukuhlangana neBrain Gym kwi "Smart Moves," incwadi ethengiswa kakhulu yiCarla Hannaford, Ph.D. UDkt. Hannaford uthi imizimba yethu inxalenye enkulu yokufunda konke, kwaye ukufunda akusiyo "umsebenzi" wengqondo. Yonke intsholongwane kunye neeseli yintanethi inika isandla kwisakhono sethu kunye nokufunda kwethu. Ootitshala abaninzi baye bafumanisa lo msebenzi kuba luncedo ekuphuculeni ukugxininiswa kwikhosi. Ukwaziswa apha, uza kufumana iindlela ezine ezisisiseko zokuzivocavoca "Brain Gym" ezizalisekisa iingcamango ezenziwe kwi "Smart Moves" kwaye zingasetyenziswa ngokukhawuleza kunoma yiphi na iklasi.
Ngezantsi luchungechunge lweentshukumo ezibizwa nge-PACE. Ziyamangalisa ukuba zilula, kodwa ziphumelela kakhulu! Wonke umntu une-PACE ekhethekileyo kwaye le mi sebenzi iza kuncedisa bobabini nomfundi ukuba babe neempembelelo, abakhutheleyo, abacacileyo kunye banamandla ekufundeni.
I-PACE ne-Brain Gym® i-Pace-Kinesthetics e-Braingym.
Njengoko uCarla Hannaford athi, "Amanzi afaka ngaphezulu kwengqondo (kunye noqikelelo lwe-90%) kunanoma yiphina inxalenye yomzimba." Ukuba nabafundi baphuze amanzi ngaphambi kwaye ngexesha leklasi banokunceda "ugcobe ivili".
Amanzi okuphuza ibaluleke kakhulu phambi kweyiphi imeko engxaki - iimvavanyo! - njengoko sifuna ukuphosa ngaphantsi koxinzelelo, kwaye i-de-hydration ingasenza ingxaki yethu ingabonakali.
Faka isandla esisodwa ukuze kubekho indawo ephakamileyo kunokwenzeka phakathi kwesithupha kunye nesicatshulwa somunwe.
Beka isicatshulwa sakho kunye nesithupha kwisincinci esincinane ngaphantsi kwethambo lekhola kwicala ngalinye le-sternum. Cinezela ngokukhawuleza ngendlela yokusukela.
Ngelo xesha, faka enye inxalenye phezu kwendawo yomnatha yesisu. Cinezela ngenyameko kule ngongoma malunga nemizuzu engama-2.
Yima okanye uhlale. Beka isandla sokunene emzimbeni ekhohlo xa uphakamisa, kwaye wenze into efanayo ngakwesobunxele kwicala elifanelekileyo nje ngokuba uhamba.
Yenza oku kuphela ukuhlala okanye ukuma malunga nemizuzu emi-2.
Ukukhupha i-Hook Ups
Yima okanye uhlale. Unqamle umlenze wangakwesokudla ngasekhohlo ezinqeni.
Thatha isandla sakho sokunene uze usiwele phezu kwesandla sekhohlo kwaye udibanise iminwe ukuze isandla sokunene siphambili.
Bend i-elbows ngaphandle kwaye uphendulele ngobumnene iminwe emzimbeni uze uhlale e-sternum (ithambo lesifuba) esiphakathi kwesifuba. Hlala kule ndawo.
Gcina ama-ankle awela kwaye ama-wrists awela kwaye aphefumle ngokusesikweni kule ndawo imizuzu embalwa. Uza kukhangela ngokukhawuleza emva kwelo xesha.
Uninzi olungakumbi lwe "Ubununu Bobuchule" kunye Nemisebenzi
Ngaba unalo nawaphi amava usebenzisa "ingqondo yonke", i-NLP, i-Suggestopedia, i- Mind Maps okanye into efana nayo? Ngaba ungathanda ukwazi ngaphezulu? Joyina ingxoxo kwiforum.
Ukusebenzisa uMculo kwiKlasi
Abaphandi abadlulileyo kwiminyaka emithandathu bayixelele ukuba abantu bafumene bhetele kwi-IQ vavanyo eliqhelekileyo emva kokuphulaphula uMoses. Uya kumangaliswa ukuba umculo omninzi unokunceda njani abafundi baseNgesi .
Inkcazo ebonakalayo yeendawo ezahlukeneyo zobuchopho, indlela abasebenza ngayo kunye nomzekelo we-ESL EFL yokusebenzisa indawo ethile.
Ukusetyenziswa kwamacandi ezinemibala ekuncedeni ubuchopho obufanelekileyo ukukhumbula iipatheni. Njalo xa usebenzisa ipeni liqinisa inkqubo yokufunda.
"Umfanekiso udweba amagama anamawaka" - Amacandelo alula ukwenza iimifanekiso ezikhawulezayo eziya kunceda nayiphi na ititshala enomdla - njengam!
- sebenzisa imidwebo kwibhodi ukukhuthaza nokukhuthaza ingxoxo yeklasi.
Suggestopedia: Isicwangciso seSifundo
Isingeniso kunye nesicwangciso sesifundo kwi " khontshi " usebenzisa indlela yokucetyiswa kwindlela yokufunda / eyiyo yokufunda.
Izipho Ezinkulu kubafundi bamazinyo